Olee otú Hichapụ iPhone Backups p
Wondershare Dr.Fone Bụ software e mere iji naghachi ehichapụ data si iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch. Mgbe a na mgbe ị pụrụ ihichapụ ihe si gị iPhone mmadụ na mberede ma ọ bụ ma eleghị anya, ị dị nnọọ ehichapụ ya n'ihi na i chere na ọ bụghị bara uru, na mgbe ahụ niile a na mberede gị mkpa ya ọzọ. Ihe ị chọrọ bụ Wondershare Dr.Fone n'ihi na ọ chọta ihe fọrọ nke nta niile ụdị nke data format ehichapụ dị ka ozi kọntaktsị, foto, ndetu, wdg si iPhone, iPad na iPod aka. Ọ na-adịghị na-akwụsị ehichapụ data nanị; ọ pụkwara naghachi data si a rụrụ arụ iOS.
Otu nke kasị mma atụmatụ nke Wondershare Dr.Fone bụ ikike n'ezie ịhụ nke faịlụ na ị ga-amasị-agbake. Ya mere, kama na-agbake gị niile ehichapụ data, ị nwere ike họrọ kpọmkwem ihe ị chọrọ iji naghachi ma na-eleghara ihe ndị ọzọ. I nwekwara ike weghachite backups si gị iTunes software ma ọ bụ iCloud.
Mfe iji: A ole na ole clicks naghachi gị furu efu data.
-Akwado ndị niile na onye ọrụ faịlụ: kọntaktị, ozi, Edeturu, na-echetara, oku History, Kalinda, Whatsapp History na ndị ọzọ.
Na-akwado ọhụrụ ngwaọrụ:-arụ ọrụ niile iOS ngwaọrụ tinyere iPhone 6s (gbakwunyere).
Họrọ faịlụ ka-natara: View na họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na ala.
Idozi iOS: Idozi iOS nsogbu na dị nnọọ a nkeji ole na ole.
Olee otú iji Dr.Fone ka ego gị iPhone na nkwado ndabere na iTunes
Nzọụkwụ 1: Mepee Wondershare Dr.Fone maka iOS na họrọ "naputa site na iTunes ndabere File" na n'elu nke Dr.Fone window. Họrọ iTunes ndabere ị chọrọ iji naghachi si ndepụta na pịa "Malite iṅomi" button na ala ka iṅomi maka data si ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Mgbe scanning zuru ezu, niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-amịpụtara na gosiri na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ha otu mgbe ndị ọzọ tupu mgbake. Ị nwere ike ịhọrọ ndị ị chọrọ iji naghachi site na-akanye ha na ịpị naghachi bọtịnụ na ala nke window.
Họrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ naghachi gị data ngwaọrụ gị ma ọ bụ gị na kọmputa. Ị nwere ike ozugbo naghachi kọntaktị, ndetu na ozi ngwaọrụ gị ọ bụrụ na ngwaọrụ na jikọọ na kọmputa gị.
I nwekwara ike ịchọ n'ihi aha faịlụ na ị na-achọ iji search mmanya.
Olee otú iji Dr.Fone ka ego gị iPhone na nkwado ndabere na iCloud
Nzọụkwụ 1: Mepee Wondershare Dr.Fone maka iOS na họrọ "naputa site na iCloud ndabere File" na n'elu nke Dr.Fone window na-abanye na gị Apple ID na paswọọdụ.
Nzọụkwụ 2: Họrọ iCloud ndabere ị chọrọ iji naghachi si ndepụta na pịa "Download" bọtịnụ n'akuku iCloud ndabere n'okpuru "State".
Nzọụkwụ 3: A mmapụta window ga-apụta, họrọ ụdị nke faịlụ ịchọrọ ibudata. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iṅomi iCloud ọdịnaya na-ele faịlụ site ọkụkụ "iṅomi" bọtịnụ.
Nzọụkwụ 4: Mgbe scanning zuru ezu, niile data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-amịpụtara na gosiri na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ha otu mgbe ndị ọzọ tupu mgbake. Ị nwere ike ịhọrọ ndị ị chọrọ iji naghachi site na-akanye ha na ịpị 'Naghachi' button na ala nke window.
Olee ka ihichapụ iPhone na nkwado ndabere na iTunes
Nzọụkwụ 1: Mepee iTunes software na kọmputa gị na-aga menu mmanya. Pịa iTunes ma họrọ mmasị.
Nzọụkwụ 2: Ịnyagharịa ka Devices taabụ na mmasị. Ị ga-ndepụta nke backups, họrọ ndabere ị chọrọ ka ihichapụ na see Nhichapụ bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3: Pịa 'Hichapụ' na mmapụta window iji gosi ihichapụ.
Olee ka ihichapụ iPhone na nkwado ndabere na iCloud
Nzọụkwụ 1: Gaa System Mmasị.
Nzọụkwụ 2: Họrọ iCloud akara ngosi.
Nzọụkwụ 3: Nke a ga-Ibu Ibu gị iCloud mmasị. Pịa na Jikwaa bọtịnụ na ala nri nke window.
Nzọụkwụ 4: Họrọ Backups taabụ na n'elu nke ndepụta; a ga-eme ka elu niile iCloud backups si ngwaọrụ gị niile jikọrọ gị iTunes akaụntụ.
Nzọụkwụ 5: Pịa Nhichapụ button na pịa Hichapụ iji gosi na ihichapu nkwado ndabere na mpaghara faịlụ ozugbo na ihe niile na mmapụta ozi.
> Resource> Ihichapu> Olee otú iji Hichapụ iPhone Backups